Na-achọ GNU / Linux buut na E4rat | Site na Linux
Ternyaahụ otu enyi gwara m banyere ya E4rat (Ext4 - Mbelata Oge Oge) otu ngwaọrụ iji mee ka usoro buut nke usoro anyị dị ngwa ma taa, ekpebiri m ịnwale ya.
Nchọta achọtara m Linuxzone.es nkuzi maka ntinye ya na nkọwa maka ọrụ ya. M na-ekwu ebe a verbatim:
Nwere ike ịchọpụta na ka oge na-aga, sistemụ gị ga-adị arọ nke ukwuu ma ọ ga - ewe ogologo oge iji kwadoo OS gị. usoro a na - enwekarị ike inyocha diski niile iji chọta ha. Iji zere nke a ma bulie gị buutu, enwere ngwaọrụ dika e4rat.
E4rat (Ext4 - Mbelata Oge Nweta) bụ usoro ngwaọrụ iji mee ka usoro mmalite ahụ dị ngwa, yana ngwa ndị na-ebuba na mmalite, ịdenye faịlụ ndị ejiri na nkeji 2 mbụ nke mbido, ibugharị ma buru ha ụzọ, wee wepu oge ọchụchọ na ntụgharị oge. Nke a na - eduga n ’ọnụego nnyefe dị elu.
Usoro ahụ nwere usoro atọ: nchịkọta ozi banyere mmalite, ịhazigharị faịlụ ndị ahụ, wee tinye ha ka ha buru ibu na buut ọ bụla.
Buru n'uche na nke a na-arụ ọrụ na magnetik diski ma ha kwesịrị ịhazi ya na ext4.
Anyị ga-ebido site na nbudata ihe omume ahụ site na peeji nke giNa nke a, m ga - ebudata faịlụ .deb, ebe m ga - eji Ubuntu 11.04.
Tupu ịwụnye ya, anyị ga-ehichapụ ureadahead, ka ọ ghara ịlụ ọgụ:
Mara: Tupu ịsachapụ, e nwere usoro abụọ.
Anyị na-etinye ihe ndabere maka e4rat:
Mgbe ahụ, anyị wụnye usoro ihe omume.
Ugbu a, m ga-akọwara gị n'ụzọ dị mfe dịka otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ. Akpa, anyị ga-dezie anyị idide ma ọ bụ grub2 dị ka ikpe nwere ike ịbụ:
N'ime faịlụ anyị na-achọ akara yiri nke a:
Y anyị tinye ndị na-esonụ na njedebe nke akara ahụ:
N'okwu m, ọ dị ka nke a:
Cheta na: The gara aga nzọụkwụ anyị nwere ike ime kpọmkwem otu ihe ahụ site na mmalite, mgbe grub ihuenyo abịa, anyị nọ na akara nke anyị OS na pịa 'e'dezie ya. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ sistemụ arụnyere na diski, ọ dị mfe ịme karịa, ebe anyị na-ezere itinye aka na mmalite nke ndị ọzọ.
Ozugbo emere nke a, anyị mechiri ya nchịkọta akụkọ Ctrl + X, na anyị malitegharịrị kọmputa anyị.
Mgbe o mechara debe usoro ahụ, anyị ga-emepe mmemme nke anyị na-amalitekarị oge, dị ka ihe nchọgharị, njikwa ozi, wdg ..., anyị nwere nkeji abụọ iji mee ya. Ozugbo emere nke a, anyị jidere n'aka na e mepụtara faịlụ ndekọ ahụ.
Azịza ya aghaghị ịbụ mbido.logỌ bụrụ na egosighi gị ihe ọ bụla, ị ga-emeghachi usoro ndị ọzọ.
Ugbu a, anyị na-alaghachi na-edezi grub, oge a anyị na-eme ya site na ihuenyo ụlọ site na ịpị e, dị ka m na-akọwa n'elu. Anyị na-agbakwunye na njedebe nke ahịrị site na mbụ otu, bụrụ ndị a:
Anyị na-emechi na Malitegharịa ekwentị, ma, oge a anyị na-eme ya na mma mode ma ọ bụ site na akara nke nyere n'iwu. Banye na aha njirimara na paswọọdụ anyị wee mepụta:
Ozugbo emere nke a, e4rat bidoro ibughari faịlị site na diski gị, (o nwere ike iwe obere oge), mgbe ọ gwụchara, anyị bidogharịa.
Ya mere na ihe omume ahụ na-agba ọsọ mgbe niile na mbido ma na-adịgide ọbụlagodi ma ọ bụrụ na anyị melite, anyị dezie iwe anyị,
na anyị na-achọ maka ahịrị:
Anyị na-agbakwunye usoro ndị a tupu jụụ ikwommiri,
Na-anọ otu a.
Anyị na-echekwa faịlụ ahụ, ma bubatagharịa iwe:
Anyị enwetala ya, site ugbu a gaa na mmemme dị mkpa ga-ebuwanye ngwa ngwa.
Maka ama ndị ọzọ, ị nwere ike ịga na ibe ha isi iyi.
Na nwa oge, m ga-anwale ya ma ọ bụrụ na m alọghachighị, ọ ga-abụ n'ihi na draịvụ m ga-anwụrịrị 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Na-achọ GNU / Linux buut na E4rat
Ọ na-arụ ọrụ f ** eze !!! Nwere ike ịgwa ya na ngwa mepere ngwa ngwa 😀
Nnukwu, m ga-anwale ya na LMDE ... Aga m agwa gị otu o si aga.
Otu ihe ahu, oburu na m loghachighi ngwa ngwa, agam alota ma emesia hehe.
Mgbe m gbalịchara ọtụtụ ugboro, ee e, ọ naghị arụ ọrụ.
Aga m anwale ọzọ ma ụbọchị ọzọ.
Ọ rụụrụ m ọrụ, na KZKGGaara, tupu ịtụfu Archlinux ya n'ala kwa hahaha
OMG! gịnị mere ya? o_0
Ehem! ọzọ m dee si ọrụ! ^ _ ^ U
Ekweghị na m gara «ọchịchịrị n'akụkụ» !!! hehehe
Nkịtị, taa KZKGGaara pụtara na Windows 7 arụnyere 😀
Ọ na-arụ ọrụ dị ka amara! Mmemme na-amalite ọtụtụ ngwa ngwa! Daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ ahụ! 😀
Achọpụtara m na enwere nzọụkwụ ị ga-amali:
sudo shutdown-r now ## NT REKWU A B M ỌZỌ
sudo nano / etc / ndabara / grub
Ọ dị m mma, m gbalịrị, na eziokwu bụ na mgbanwe ahụ abụghị nke ukwuu: /, na enweghị m usoro maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ.
Ezi ehihie, agbasoro m usoro leta ahụ mana ọ naghị arụ ọrụ, ọbụnadị e meghị faịlụ Startup.log wee lelee mmemme ndị na-amalite ma e4rat anaghị amalite, enwere m Ubuntu 13.04, eziokwu na-ebugharị m ntakịrị. ara ... enyemaka gị
Zaghachi Angel De La Vega
Ọmarịcha usoro a site na ịmalite na 1 nkeji 40 sekọnd ruo 29 nkeji sekọnd
Emepụtara Choqok 1.2 [Foto + Nkọwa + Download]